Soomaaliya maxaa kala gudboon hadalkii Museveni? - BBC News Somali
Soomaaliya maxaa kala gudboon hadalkii Museveni?
Lahaanshaha sawirka Xafiiska Madaxweynaha Uganda
Image caption Madaxweyne Farmajo iyo Museveni oo ku kulmaya madaxtooyada Uganda
"Waxaa jira dalal badan oo aan lahayn dowlad. Way jiraan, balse ma haystaan hay'ad nidaamsan oo maamusha, Soomaaliya waa mid ka mid ah. Waxaa jira dalal kale balse ma sheegayo sababo diblomaasi awgeed". Ayuu yiri Madaxweynaha Uganda.
"Macnaha dhabta ah" ee hadalka Museveni
Image caption Madaxweyne Museveni
"Hadalka madaxweyne Museveni wuxuu ahaa hadal cilmiyadeysan oo ma aheyn hadal siyaasadeysan, wuxuu ka hadlay Country oo dal ah, Nation oo ummad ah iyo state oo dowlad ah oo xukuumadii dalka xukunka gaarsiin laheyd, marka Soomaaliya ayuu tusaale usoo qaatay oo waxaa uu yir dalkii Soomaaliya dowladda gacanta ugu ma jirto, oo waad arkeysa Muqdisho waxaa ilaaliya askarttii Uganda , dalkii oo dhan gacanta ugu ma jiro dowladda sida magaalooyinka Bu'aale, Hargeisa iyo meelo kale oo badan , marka lama oran karo Soomaaliya waxaa ka jira dowlad xukunkeeda uu baahsan yahay". Waxaa sidaasi BBC u sheegay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika.